Philips Momentum 278M1R, nyocha miri emi | Akụkọ Ngwa
Philips Momentum 278M1R, nyocha miri emi
Miguel Hernandez | | General, Foto na ụda, Nyocha, TV
Site na mmalite nke telivishọn, ụwa nkwanye ugwu na ọkachasị egwuregwu, ndị na -emepụta nleba anya na -enye ụzọ ọzọ na -atọ ụtọ nke na -enyere ndị ọrụ aka ịhazi nhazi dị mma nke na -enyere anyị aka iji ohere ohere na -efunahụ njirimara dị mkpa..
Nke a Philips Momentum 278M1R na-enye ihe niile na-atọ ụtọ nwere egwuregwu pụrụ iche, ọkachamara na ike mgbasa ozi. Chọpụta n'ime anyị nyocha miri emi nke ihe nlegharị anya Philips a na-ahụ anya na ihe ahụmịhe anyị niile nke ojiji bụ, anyị maara na ị gaghị achọ ịhapụ ya, ọ bụrụ na ị na-achọ nyocha, ị nwere ike mechaa hụ nke a n'anya. otu.
3 Njikọ na HDR
4 Ahụmịhe ụda na ọtụtụ mgbasa ozi
Nke a Philips Momentum 278M1R na-a drinksụ ozugbo site na "nnukwu nwanne ya" nke oge 55 inch Philips Momentum, Kama, ọ na -elekwasị anya n'inye ahụmịhe onye ọrụ dị egwu n'akụkụ dị iche iche, otu n'ime ha bụ imewe. Ogo ụlọ ahụ dị mma nke ukwuu, mbinye aka a na -ahụkarị na ngwaahịa Philips, n'aka nke ya na -ajụ ụdị ụdị "egwuregwu", ihe a na -enwe ekele na ọ ga -enwe ike itinye ya na ihe ga -abụ ọmụmụ ma ọ bụ ọdụ ọrụ. Nhazi ahụ nụchara anụcha ma maa mma, na -ezobe njiri mara ya na ezigbo akpụkpọ atụrụ.
Ihe nhazi ya ọ masịrị gị? Na Amazon ọ bụ na ọnụahịa kachasị mma na mbufe 24h n'efu.
Ma elu bezel na A na -ebelata akụkụ ya ihe dị ka milimita asatọ, ihe niile fọdụrụ maka akụkụ ala. Ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ dị na ala aka nri yana Ambiglow ya nke gbara n'azụ ngwaọrụ ahụ, ebe njikọta na kọlụm nkwado ya dị. Kọlụm a nwere sistemụ nrụnye "pịa" dị mfe, dị ka ọ na-adịkarị na ngwaahịa Philips ndị a n'etiti ma ọ bụ nke dị elu, anyị na-enwekwa ekele dị ukwuu na anyị nwere ike ịme n'enweghị ụdị ngwa ọrụ maka mgbakọ mbụ.
Na ọkwa imewe, nke a Oge Philips 278M1R Ọ pụtara maka ịdị mma ya, ọmarịcha ụlọ ọrụ mmepụta ihe mara mma na ọmarịcha LED ya.
Anyị na -amalite site na otu panel nke 27 sentimita asatọ nwere mkpebi 4K UHD nke pikselụ 3840 x 2160 na mmekọrịta nke akụkụ ọdịnala nke 16: 9 yana yana ndakọrịta HDR. Mkpebi a na -enye anyị njupụta pikselụ nke 163 DPI na ebe pikselụ dị naanị milimita 0,155 x 0,155, ihe ị ga -eburu n'uche. Anyị na -ewere iko mbụ nke mmiri oyi na iko soda na mmelite panel, nke kwụgidere na 60 Hz.
Anyị nwere a mmasị 350 cd / m2 LED backlight, ebe ọ bụ na dịka o doro anya, anyị na -arụ ọrụ na panel IPS LCD. Anyị nwere ọdịiche 1000: 1 nke a na -enye anyị ohere ijikọ ọnụ 91% nke oke NTSC, 105% nke oke sRGB, yana 89% nke ọkọlọtọ Adobe RGB, yabụ anyị nwere ike lelee ya ka ọ dabara maka ndezi foto dabere na nnwale anyị. Ọ bụ eziokwu na agba, anyị nọrọ nso na ezigbo ọnọdụ okpomọkụ nke 6500K nke na -ebute onyonyo doro anya na eke, ewezuga ikekwe na -acha uhie uhie, ebe ndị na -enyocha Philips na -eju afọ. Ma ọ bụghị ya, anyị nwere agba nwere otu ụdị nke yiri ka ọ dị mma ma rụọ ọrụ yana igwu egwu. Ị nwere ike ịzụta ya na ọnụahịa kacha mma na Amazon, echefula ohere a.
Njikọ na HDR
Nke a Philips Momentum 278M1R enweghị ihe ọ bụla, yabụ ka anyị jiri ihe malite Agbaghara m njikọ USB-C ozugbo. Ọ bụ eziokwu na etinyebeghị teknụzụ a na gburugburu ọkachamara, ndị ọrụ Apple ga -enwe ekele maka ya. Nke abuo, Anyị na -aga n'ihu n'ọtụtụ ohere, nke kacha mma n'ahịa dịka m nwere ike ịhụ:
Mmepụta ekweisi 1x 3,5mm Jack
Ihe ngosi 2 x HDMI 2.0
1x Ngosipụta 1.4
1x USB-B Upstream (maka ngwa na PC)
4x USB 3.2 Downstream maka njikọ njikọta (gụnyere ụgwọ ngwa ngwa BC 1.2)
Ndepụta ọdụ ụgbọ mmiri a na-apụghị ịgụta ọnụ ga-enye anyị ohere ime n'enweghị HUB ma ọ bụrụ na anyị ejiri ọdụ ụgbọ mmiri USB-B, ihe a na-eme na nlele Philips ndị ọzọ site na ọdụ ụgbọ USB-C. Ọ na -arụ ọrụ maka ahụigodo, ụmụ oke na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ihe dị m mma nke ukwuu.
Banyere HDR, anyị bụ ndị agbakwunyere HDR400, anyị na -eburu n'uche na anyị enweghị nnukwu nchapụta ma ọ bụ ọkụ zonal, yabụ HDR na -eme ike ya kacha mma. Ọ nwere gamut agba gamut yabụ agba ya dị obosara na mpaghara gbara ọchịchịrị. Ihie ahụ nwere ezi uche yana n'ozuzu enyela anyị ezigbo nsonaazụ.
Ahụmịhe ụda na ọtụtụ mgbasa ozi
Nke a Philips Momentum 278M1R nwere ndị na-ekwu okwu mgbada mgbada ala abụọ nwere nke ọma ike atụmatụ nke 5W maka onye ọ bụla. Nke bụ eziokwu bụ na ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ enweghị bass, ọ na -enye anyị ahụmịhe karịa nkezi. Agbanyeghị, m ka na -akwado ezigbo ụda ụda dịka Sonos Beam dị ka ezigbo ụlọ ọrụ maka ụdị ngwaọrụ a. Ha na -ejikwa mejupụta ahụmịhe anyị ma ọ bụrụ na anyị anaghị achọ nnukwu ihe ma ha na -ewepụ anyị n'ụzọ nke ọma. Na tiori, Ha bụ ndị ọkà okwu akwadoro ụda DTS.
Banyere ahụmịhe onye ọrụ, m ga -ekwupụta na m bụ onye na -akwado nrụpụta ụlọ nrụpụta nke ndị na -enyocha Philips, ọ dị ka ihe okike na nke dabara adaba. Anyị ejirila PlayStation 5 were atụmatụ ya wee rụọ ọrụ n'otu aka ahụ site na Apple MacBook Pro, o mezuola ma maka mbipụta foto yana maka egwuregwu vidiyo. Anyị nwere ụdịdị Amụma-onyonyo nwere ntọala maka ọrụ ọ bụla, yana teknụzụ teknụzụ FlickerFree agbakwunyere. O doro anya na ha naanị 4 ms imputlag (GtG) ha na -enye anyị ohere ịnụ ụtọ ndị na -agba ụta na egwuregwu vidiyo ndị ọzọ. Ee n'ezie, nke 60 Hz ikekwe ha adaghị maka ndị egwuregwu na -achọsi ike.
Ahụmịhe nke 22 RGB LEDs n'azụ okpokoro nke Philips na -eme baptizim dịka Ambiglow dị egwu, ọ na -emepụta mmikpu nke imikpu n'ime mmiri, yana gịnị kpatara na ị gaghị ekwu ya, ọ bụ naanị "ihe ọchị" n'ọfịs / ụlọ anyị, niile na -enweghị sọftụwia mpụga ọ bụla. .
Anyị na -eche ihu ileba anya nke ukwuu, ezigbo nhọrọ maka ndị na -amụ / na -arụ ọrụ n'otu ọnọdụ ebe ha na -anọkọ oge ntụrụndụ, ọ na -enye anyị ohere ịkwalite oghere na -enweghị efufu otu ọrụ, yana akara mkpuchi Philips. Ọnụahịa ahụ, ihe dịka euro 400 dabere na ebe a na -ere ya, yana nnyefe n'efu na Amazon.
Mara mma, arụpụtara ya nke ọma
Nhọrọ sara mbara nke ọdụ ụgbọ mmiri na njikọta
Site na Ambiglow ị na -echekwa eriri LED
Ọmarịcha panel nwere ezigbo ọrụ yana ntọala
Ọ na -ewute m nke ukwuu karịa na oke ọnụahịa a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Philips Momentum 278M1R, nyocha miri emi
Roborock Dya, oghere mgbochi mmiri na akọrọ kachasị
HyperX Pulsefire Mat RGB, ezigbo ute maka nhazi gị